Nezvedu - Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd.
Quanzhou Pingtai Engineering Machine Co., Ltd. yakavambwa muna 1987, Mushure memakore anopfuura makumi maviri ekuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi .Pingtai yave mutungamiri weChina uye mugadziri ane mukurumbira pasi rose.Iri ibhizinesi remazuva ano rinonyanya kubatanidza michina yekuvaka nemidziyo yemidziyo kugadzira uye kutengesa network.
Kambani iyi inonyanya kugadzira marudzi akasiyana-siyana evacheri mabulldzers spare parts, uye zvigadzirwa zvinosanganisira undercarriger and wear resistant parts etc.
Pingtai kambani inotsigira "kutendeseka-kwakavakirwa, mhando semudzi" wemisimboti yekutanga, ine hupfumi hwakasiyana hwezvigadzirwa, mutengo unonzwisisika, vimbiso yenguva yekutumira neyakanakisa mushure mesevhisi.Zvigadzirwa zvinotengeswa pasirese pasirese, kuwirirana uye kubatsirana, kuhwina-kuhwina kusimudzira, pamwe chete kugadzira mukana wakanaka wekubatana uye kuve neramangwana riri nani.
Kambani yePingtai ine manejimendi emazuva ano uye timu yepamusoro yevashandi vehunyanzvi, manejimendi akakwana, midziyo yepamberi, tekinoroji yekutanga-kirasi, hutano hwakakwana. Iyo kambani inonyanya mukugadzirwa kwebulldozer uye yekuchera michina "undercarriage" zvigadzirwa, uye mabhizinesi ane mukurumbira pasi rose kuchengetedza kwenguva refu. -temu yakanaka kubatana.Chigadzirwa chemhando chasvika padanho repamusoro repasi rose.
Iyo brand "PTZM" inoshanda kuKomatsu, Caterpillar, Volvo, Hitachi, Hyundai, Kato nemimwe michina yekuvaka ine mukurumbira pasi rose.Iyo tekinoroji mwero, kugadzira uye kuongororwa kwezvigadzirwa kunotora nzira yekuJapan yekutarisira, uye mhando inosvika kuOEM standard.Zvigadzirwa zvinotumirwa kuSoutheast Asia, Japan, Korea, Europe, Middle East, America nedzimwe nyika.
Iyo yekugadzira michina inotora yakakwirira chaiyo CNC muchina
Mainjiniya edu ane makore mazhinji ehunyanzvi hwekuita uye akagadzira zvigadzirwa zvitsva zvakawanda zvevatengi.Tekinoroji yave kuzivikanwa uye mukurumbira wakanaka nevatengi.Tine dzimba dzinotungamira dzekutsvagisa nekusimudzira kugona mukutakura, pamwe neindasitiri-yepamusoro nhanho mukugadzira, kupisa. kurapwa, machining, muviri uye kemikari kuedza, unhu kudzora abilities.Kubva akatanga, PINGTAI kukwikwidzana mano anogara achionekwa kuti unyanzvi.
Izvo zvigadzirwa zvinonyanya kutenderera simbi yekugadzira uye kukanda chaiko uye inogona kushandiswa mumabasa emigodhi.
Iyo kambani ine timu yehunyanzvi yekuyedza, zvigadzirwa kuburikidza nehafu-yakapedza chigadzirwa bvunzo uye yakapedza chigadzirwa kuyedzwa.
Customized saizi uye zvimiro zviripo.Tinokugamuchirai kugovera zano renyu nesu, ngatishandei pamwe chete kuti tiite kuti hupenyu huve hunyanzvi.
Excavator Bucket Wear Parts, Bearing Track Roller, High Simba Bolt, Excavator Undercarriage Wear, Rubber Track Rollers, Excavator Bucket Kucheka Kumucheto,